Umkhiqizi kanye Umhlinzeki Weplastiki yaseChina | Roc
I-ROCPLEX Plastic plywood iyipulangwe lokusetshenziswa kwekhwalithi ephezulu elimbozwe ngepulasitiki engu-1.0mm ephenduka ipulasitiki evikelayo ngesikhathi sokukhiqiza. Imiphetho ivalwe ngopende we-acrylic osakazeka ngamanzi.
Ipulangwe lepulasitiki liyipulangwe elenziwe ngekhwalithi ephezulu futhi elisebenzisekayo, lisetshenziswa kakhulu ekwakheni iNdlu, Ukwakhiwa Komgwaqo, Amaphrojekthi Wokhonkolo Abakhulu, imishayo yebhuloho, njll.
Ipulangwe lepulasitiki le-ROCPLEX PPE elimbozwe nge-polypropylene enamathela zombili izinhlangothi zika-1.6 mm ubukhulu.
Ukumboza kunciphisa ngokuphelele ukumuncwa kwepulasitiki komswakama webhodi lefomu.
Izici zokhuni eziqhathaniswa neplywood ukuvikela onqenqemeni olujwayelekile: Amajazi amabili opende we-acrylic ongangenisi manzi.
Ipulangwe lepulasitiki le-ROCPLEX lokuqina okuqinile, okuzinzile, kokhonkolo
Imininingwane ye-ROCPLEX Plastic Plywood
Ohlangothini lweplastiki olungu-0.8mm
Umgogodla wepoplar / umgogodla weCombi / umgogodla oqinile / umgogodla wePine / umgogodla weBirch
I-4-28mm (ukushuba okujwayelekile: 12mm, 15mm, 18mm, 21mm)
Izikhathi ezingaphezu kwama-50
ROCPLEX Plastic Plywood Inzuzo
Uma ifakwa emanzini abilayo amahora angama-72, isanamathela kunamathelisi futhi ayikhubazeki.
Isimo somzimba singcono kunesikhunta sensimbi futhi singenelisa izidingo zokwakha isikhunta, lezo zensimbi kulula ukuba zikhubazeke futhi azikwazi ukubushelela ubushelelezi bazo ngisho nangemva kokulungiswa.
Uma isetshenziswa ngokuhambisana nemifanekiso ngokuqinile, ingasetshenziswa futhi izikhathi ezingaphezu kwezingu-50.
Ukunciphisa izindleko kakhulu nokugwema ububi kusuka (ngokugqwala nokuguguleka kwensimbi isikhunta).
Ixazulula izinkinga zomhlaba ovuzayo futhi onolaka phakathi kwenqubo yokwakha.
Ikakhulukazi efanelekayo ukuchelela ukhonkolo iphrojekthi, ingenza ukhonkolo ebusweni bushelelezi futhi bushelelezi.
I-ROCPLEX Plastic Plywood Yonga isikhathi, umsebenzi kanye ne-cos
I-ROCPLEX Plastic plywood Londoloza izindleko
Yiba okhethekile nge-phenolic glue nefilimu
Ifilimu ebhekene neplywood ingahlukaniswa futhi isetshenziswe kaningi kubo bobabili ubuso, konga izindleko ezingama-25%.
Ukusebenziseka kahle kwebanga elikhethekile lomgogodla
Yiba okhethekile ngokunamathela
I-ROCPLEX Plastic plywood Nciphisa ubude besikhathi
Umphumela omuhle wokucekela phansi
Fushanisa ama-30% wesikhathi.
Gwema ukwakhiwa kabusha kodonga
Yiba lula ukusikeka nokuxuba
I-ROCPLEX Plastic plywood ikhwalithi ephezulu yokusakaza
Ubuso obuyisicaba nobushelelezi
Ubuso busicaba futhi bushelelezi, kugwema ukuphuma kwezinsalela zamabhamuza nokhonkolo.
Isakhiwo sokungena kwamanzi nokuphefumula
Amaphethelo apholishiwe ngokucophelela
ROCPLEX Plastic Plywood Padking Futhi Iyalayisha
I-ROCPLEX Film Plywood Ebhekene Nayo Eqinisekiswe Ngu
Langaphambilini Ukupakisha Plywood